Urban ụlọ nche Forex egosi - Forex Indicators Download
Home MT4 Indicators Urban ụlọ nche Forex egosi
Urban ụlọ nche Forex egosi
site Vincent Koh -
Urban ụlọ nche Forex egosi na-adabere na-akpụ akpụ averages na ọ dị mma maka intraday ahịa. The egosi nwere a ikwu arụmọrụ larịị nke banyere 75%. Ọ bụ a-egosi ahia na karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-a mbido. Ọ na-arụ ọrụ na-enye gị n'ókè nke mgbe ebe ọ bụ na-emechi gị iwu na ya mere na-eme ka trading mfe ma na-erughị ọtụtụ.
Olee otú nke a na-egosi ọrụ?
The Urban ụlọ nche egosi dabeere na isii na-akpụ akpụ averages nke dịgasị na ha mgbanwe na-akpata. The mgbanwe na-akpata bụ a oke na na-eji na-akpụ akpụ averages iji n'ụzọ nkịtị-akpali ndị na-akpụ akpụ nkezi akara na-atụ ma ọ bụ azụ site ụfọdụ uru.
Nke a na egosi bụ a na-emekarị egosi. The ọnụ ọgụgụ ka elu nke na-akpụ akpụ averages eje ozi dị ka a ụzọ na iwepu ụgha n'ókè.
The isii más na-kewara abụọ. Atọ elu-akpali akpali averages na atọ ala-akpali akpali averages. The atọ elu-akpali akpali averages bụ aqua na agba mgbe atọ ala-akpụ akpụ averages bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba. Ị nwere ike ịgbanwe nke a na agba iji kwekọọ gị na agba nke oke. The atọ elu-akpali akpali averages emekarị ịkpali na a anya yiri ụzọ mgbe atọ ala-akpali akpali averages otu. Ya mere niile atọ elu-akpali akpali averages mgbe ụfọdụ gabiga atọ ala-akpali akpali averages.
E wezụga na-egosipụta na-akpụ akpụ averages edoghi na chaatị, ngosi a na-egosiputa àkú nile nke bụ isi entry n'ókè. The ozu ahia nwere na-eche maka akụ na-egosi maka ya ma ọ bụ ya na-edebe a na-ere ma ọ bụ a Buy iji. Mgbe ụfọdụ, ngosi nwere ike n'ịwa yiri akụ na-esonụ ọ bụla ọzọ nke na-eme ka a nkwenye nke gara aga na-emekarị nke ahịa ahịa.
Fig.1. The Urban ụlọ nche egosi.
The agba nke akụ eme bụ ndị ma aqua ọ bụ ọbara ọbara. The aqua akụ na-egosi a ala na-emekarị mgbe uhie akụ na-egosi a ala na-emekarị nke ahịa ahịa. Mgbe àkú na-eme, ngosi nwekwara adọta a akara n'ogo na nke iji ga-enịm. Nke a na-enyere na-akọwapụta ahụ n'ezie ahịa larịị mgbaàmà e nyere na otú enyere ndị ahia ikpebi ma ọ ga-edebe ihe iji ma ọ bụ na-ọ bụrụ na ọ ma ọ bụ na ọ bụ na chaatị mgbe mgbaàmà e nyere. Ọmụmaatụ, i nwere ike ite n'ime ihe GBP / USD chaatị na mgbe ahụ, mgbe oge ụfọdụ ị ịgbanwee gaa na EUR / USD. Ma otu ị ịgbanwee gaa na EUR / USD, ị na-achọpụta na e nwere a na-ere ihe mgbaàmà na e nyere a mgbe gara aga. Site na-achọ na mgbe nke akara na anya si akara ma ọ bụ nọmba nke idọba-oriọna na kpụrụ site mgbe ahụ, ị ga-enwe ike ikpebi ma ọ bụ uru ọ na-edebe a na-ere iji ma ọ bụ na-eche maka ọzọ mgbaàmà.
Iji Urban ụlọ nche egosi ebe na nso iwu.
Aqua akụ - ị kwesịrị ị na-edebe a Buy.
Red akụ - ị kwesịrị ị na-edebe a na-ere iji.
Mgbe ịtụkwasị ọ bụla nke trades, ị kwesịrị izere ịtụkwasị gị trades mgbe ọ bụ akaha (ma ọ bụrụ na ọ bụ ogologo oge ebe ọ bụ na mgbaàmà e nyere).
Ọzọkwa, i kwesịrị iji na-akwụsị na-etoju. Ị ga-eji na-ahụ uru ma na-akwụsị weere nke a ruru nke 1:1. nke ahụ bụ, ma ọ bụrụ na ị na-edebe gị nkwụsị ọnwụ na 15 pips, ị kwesịrị ị na-etinye gị na-ahụ uru n'otu 15 pips.
Fig.2. Ịtụkwasị iwu iji Urban ụlọ nche egosi.
Urban ụlọ nche Forex egosi bụ a Metatrader 4 (MT4) egosi na ọdịdị zuru oke nke Forex egosi bụ ịgbanwe akwakọba ihe mere eme data.
Urban ụlọ nche Forex egosi na-enye ohere ịchọpụta iche iche peculiarities na ihe nakawa etu esi na price Ọnọdụ nke na-adịghị ahụ anya na gba ọtọ anya.
Olee otú iji wụnye Urban ụlọ nche Forex Indicator.mq4?
Download Urban ụlọ nche Forex Indicator.mq4
Copy Urban ụlọ nche Forex Indicator.mq4 gị Metatrader Directory / ọkachamara / egosi /
Right click na Urban ụlọ nche Forex Indicator.mq4
Egosi Urban ụlọ nche Forex Indicator.mq4 dị na gị Chart
Olee otú iji wepu Urban ụlọ nche Forex Indicator.mq4 gị Metatrader 4 chaatị?
Urban ụlọ nche
n'isiokwuGbaa Midia Forex egosi
isiokwu na-esonụTrend n'ihu lekọtara 2 Forex egosi